ပြောချင်တာတွေ ပြောမယ်နော် | မောင်ဂုရု သရော်သည်။
ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာတာ လား ဟင်….
Filed under: ပြောချင်တာတွေ ပြောမယ်နော် — gurugyi @ 3:18 pm
ဒီ ကိစ္စ ကို မပြောတော့ဘူးလို့ နေပေမယ့် မနေနိုင်ဘူး… မနေနိုင်အောင် လာလာဆွနေကြတယ်။… ဓါတ်တမ်းနဲ့ တစ်မျိုး… လျှပ်စစ် စာပို့ နဲ့ တစ်ဖုံ… ဟိုနေရာ ကွိစိ… ကွစိ.. ဒီနေရာ တွတ်ကယ် တွတ်ကယ် နဲ့ … ကြာလာတော့ မျိုသိပ်မထား ချင်တော့ ဘူး….
ဖြစ်တဲ့ ရောဂါက တစ်ခု ခွဲတာ က တစ်ခု… သေသွားတယ်… လူနာရှင်က မကျေနပ်ဘူး… ဒါရှင်းရှင်းလေး…မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် .. တရားစွဲပေါ့.. ဥပဒေရှိနေတာပဲ… အကုန်တရားစွဲပစ်.. လျော်ကြေးတွေ တစ်နင့်တစ်ပိုးတောင်းပလိုက်… လူကယ်တာ မဟုတ်ဘူး.. လူသတ်တာလို့ မြင်တယ်မဟုတ်လား.. တရားဥပဒေ ရှိတယ်… ရင်ဆိုင်လိုက်… ဆော်.. အပြတ်ဆော်.. နလံမထူနိုင်အောင် ဆော်… နည်းနည်းလေး ခေါင်းပြူတာနဲ့ ဆော်…. အားပေးတယ်…
ခုတော့ ဘယ့်နဲ့ဗျာ… အသံထွက်မှ လူသိ.. လူမိတော့မှ ကိုင်ကြည့်တာပါ ဆိုတာလိုပဲ… ထိုးကျွေးပစ်လိုက်သလို ခံစားရတယ်…
ဆရာဝန်မှားတယ် ဆိုရင်… အဲဒီဆရာဝန် က အဲဒီဆေးရုံမှာ ထင်ရာလုပ်ခွင့် ရလို့လား… ဒါဆို ဆေးရုံလည်းမှားတယ်… လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ လူတွေလည်းမှားတယ်..။ အားလုံးပါတယ်။
ခပ်တည်တည်နဲ့ လူလည်လုပ်ချင်တဲ့ တတ်ယောက်ကားတွေကလည်း များမှများ… နားမလည်ပါးမလည်နဲ့ … ဝင်ပီး ယောတောရှိနဲ့ နေရာဝင်ယူတာက ရှိသေး…။ ဘာတွေလဲ။ သေရေးရှင်ရေးတွေလုပ်နေတာ။ အမြတ်ထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အားနည်းချက်ရှိတယ်ထင်ရင် အားနည်းချက်ကို ထောက်ပြ။ အားသာချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်…။ မပြောပလောက်ရင် ချင့်ချိန်ပြ လိုက်.. တော်ရောပေါ့။
လှိုင်သာယာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး တုန်းက ဘယ် သကောင့်သားမှ ဒေါင်းတိမောင်းတိ အပုပ်ချကြလို့လဲ… ခုကြခါမှ… အံမယ်လေး တရားမျှတလိုက်ကြတဲ့ ဘိုးတော်တွေ ဘွားတော်တွေ…